နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင်းဆီပန်းမျိုးစိတ်သစ် အမည်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် | NLD
Home Chairperson နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင်းဆီပန်းမျိုးစိတ်သစ် အမည်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
Posted By: Nld Officialon: မေ 24, 2017 In: ChairpersonNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ပေကျင်းမြို့မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ကူမင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိရာ ယူနန်ပြည်နယ် ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး H.E.Mr. Chen Shum၊ မြန်မာ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးစိုးပိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကူမင်းလေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ယူနန်ပြည်နယ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ချန်ဟောင်နှင့် ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ကူမင်းမြို့ရှိ Hai Geng Garden Hotel ၌ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုမြှင့်တင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေး၊ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ဖော်ဆောင်ရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးကြသည်။
ထို့နောက် ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် Hai Geng Garden Hotel ၌ ကျင်းပသည့် နှင်းဆီပန်းမျိုးစိတ်သစ် အမည်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြ သည်။
အခမ်းအနားတွင် မျိုးစိတ်ပညာရှင်က နှင်းဆီပန်းမျိုးစိတ်သစ် ဖန်တီးခဲ့မှုနှင့် နှင်းဆီ ပန်းမျိုးစိတ်သစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံ နှင်းဆီပန်းမျိုး စိတ်သစ် အမည်ပေးအပ်ခြင်း အထိမ်းအမှတ် မှတ်တမ်းကိုပေးအပ်သည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား ဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် နှင်းဆီပန်း၏အမည်ကို “အောင်ဆန်းစုကြည်နှင်းဆီ”ဟု အမည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ယူနန်ပြည်နယ် ပါတီအတွင်းရေးမှူးက အဆိုပါဟိုတယ်၌ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်သည်။
ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့ဝင် များသည် ကူမင်းမြို့မှ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ထွက်ခွာရာ ယူနန်ပြည်နယ် ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး H.E.Mr. Chen Shum၊ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်း၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးစိုးပိုင်၊ သံရုံးနှင့် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးတို့မှ တာဝန်ရှိသူများက ကူမင်းလေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကြရာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မျိုးအောင်နှင့်ဇနီး၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမင်းသူ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ မစ္စတာ ချမ်းချမ်းတို့က ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆားဘီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် ခေတ္တလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ